Vaovao - Torohevitra madinidinika momba ny fitrandrahana etona SPL
Aza manao serivisy na eo akaikin'ny mpankafy, motera, na kapila na ao anaty ilay singa raha tsy mahazo antoka aloha fa tapaka, mihidy ary mivoaka ireo mpankafy sy paompy.
Hamarino raha toa ka napetraka tsara ny fitondra môtô mpankafy mba hisorohana ny be loatra amin'ny maotera.
Ny fisokafana sy / na ny sakana alentika dia mety misy eo amin'ny farany ambany amin'ny fantson-drano mangatsiaka. Mitandrema rehefa mandeha ao anatin'ity fitaovana ity.
Ny tampon'ny marindrano ambonin'ilay singa dia tsy natao hampiasaina ho toy ny sehatra mandeha na sehatra iasana. Raha tadiavina ny fidirana eo an-tampon'ny singa dia ampandrenesina ny mpividy / mpampiasa farany hampiasa fomba mety mifanaraka amin'ny fenitry ny fiarovana azo ampiharina avy amin'ny manampahefana.
Ny fantsom-panafody dia tsy natao hanohanana ny lanjan'ny olona na hampiasaina ho tahiry na toeram-piasana na fitaovana na fitaovana hafa. Ny fampiasana azy ireo toy ny mandeha an-tongotra, miasa na mitahiry toerana dia mety hiteraka ratra amin'ny mpiasa na simba amin'ny fitaovana. Tsy tokony hosaronan'ny labasy vita amin'ny plastika ireo singa miaraka amin'ny mpanala aotra.
Ny mpiasa dia miharihary mivantana amin'ny lalan-drivotra sy ny onja / zavona mifandraika amin'izany, nateraka nandritra ny fiasan'ny rafitra fizarana rano sy / na mpankafy, na zavona novokarin'ny fiaramanidina mahery vaika na rivotra tery (raha ampiasaina hanadiovana ireo singa amin'ny rafitra rano miverina) , dia tsy maintsy mitafy fitaovam-piarovana amin'ny taovam-pisefoana nankatoavina ho an'ny fampiasana izany avy amin'ny manampahefana misahana ny fiarovana sy ny asa ara-pahasalamana.
Ny heater basin dia tsy natao hisorohana ny gilasy mandritra ny fiasan'ny tarika. Aza miasa mandritra ny fotoana maharitra ny fitaovana fanamafisam-peza. Mety hitranga ny mari-pana ambany ambany, ary tsy hikatona ny rafitra izay mety hiteraka fahavoazana amin'ny heater sy ny unit.
Azafady mba jereo ny fetran'ny Warranty ao amin'ny fonosana fandefasana izay mihatra sy manan-kery amin'ny fotoana fivarotana / fividianana ireo vokatra ireo. Voalaza ao amin'ity boky torolàlana ity ireo serivisy natolotra ho an'ny fanombohana, ny asa ary ny fanidiana, ary ny faharetan'ny tsirairay.
Ny singa SPL dia napetraka avy hatrany aorian'ny fandefasana azy ary maro no miasa mandritra ny taona. Na izany aza, raha tehirizina mandritra ny fotoana maharitra ilay singa na alohan'ny fametrahana na aorian'ny fametrahana dia tokony hotandremana ny fisorohana sasany. Ohatra, ny fanaronana ilay singa miaraka amina plastika vita amin'ny plastika mandritra ny fitehirizana dia mety hamandrika ny hafanana ao anatin'ny singa, mety hiteraka fahasimbana amin'ny famenoana sy ireo singa plastika hafa. Raha toa ka tsy maintsy rakofana mandritra ny fitehirizana ilay singa, dia tokony hampiasa tarpa miharihary, tarp taratra.
Ny milina elektrika, mekanika ary mihodina rehetra dia mety hampidi-doza, indrindra ho an'ireo tsy mahalala ny endriny, ny fananganana azy ary ny asany. Noho izany, ampiasao fomba fanidiana mety. Ny fiarovana azo antoka (ao anatin'izany ny fampiasana takelaka fiarovana raha ilaina) dia tokony horaisina miaraka amin'ity fitaovana ity mba hiarovana ny besinimaro amin'ny ratra sy hisorohana ny fahasimban'ny fitaovana, ny rafitra mifandraika amin'izany ary ny toerana.
Aza mampiasa menaka misy vovoka fanosotra amin'ny fanosorana diloilo. Ny menaka detergent dia hanaisotra ilay grafita amin'ny tanany mitondra ary hiteraka tsy fahombiazan'ny fiterahana. Aza manakorontana koa ny fampifanarahana mitondra azy amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fanitsiana cap cap amin'ny singa vaovao satria voahitsy ao amin'ny orinasa izy io.
Ity fitaovana ity dia tsy tokony hasaina mihitsy raha tsy misy ny efijery mpankafy, takelaka fidirana ary varavarana fidirana amin'ny toerany. Ho fiarovana ny serivisy ekena sy ny fikojakojana mpiasa dia apetraho ny jiro tsy azo hidiana azo zahana izay hita eo imason'ilay singa isaky ny mpankafy sy maotera paompy mifandraika amin'ity fitaovana ity araka ny toe-javatra azo ampiharina.
Ny fomba mekanika sy ny asa dia tsy maintsy ampiasaina hiarovana ireo vokatra ireo amin'ny fahasimbana sy / na hampihena ny fahombiazany noho ny fihenan'ny hatsiaka.
Aza mampiasa solifara miorina amin'ny klôroôma na klôria toa ny asidra mihintsy na muriatic (hydrochloric) hanadiovana vy vy. Zava-dehibe ny famafana ny rano amin'ny rano mafana ary mamafa amin'ny lamba maina aorian'ny fanadiovana.
Fampahalalana momba ny fikojakojana ankapobeny
Ny serivisy takiana mba hitazonana tapa-java-pisotro mangatsiaka manaparitaka dia asan'ny kalitaon'ny rivotra sy rano amin'ny faritry ny fametrahana azy.
AIR: Ny toe-piainana mampidi-doza indrindra dia ireo manana setroka indostrialy, setroka simika, sira na vovoka mavesatra. Ny fahalotoan-drivotra toy izany dia entina ao anaty fitaovana ary entin'ny rano miverimberina mba hamorona vahaolana manimba.
RANO:Ny toe-javatra mampidi-doza indrindra dia mivoatra satria mivoaka etona amin'ny rano ny rano, avelany ao ireo solida voarindra izay voarakitra ao anaty rano makiazy. Ireto poti-javatra narotsaka ireto dia mety ho alkaly na asidra ary, satria mifantoka amin'ny rano mikoriana izy ireo, dia mety hiteraka fiakarana na hanafaingana ny harafesina.
lNy haben'ny fahalotoana amin'ny rivotra sy ny rano dia mamaritra ny faharetan'ny ankamaroan'ny serivisy fikojakojana ary koa mifehy ny fatran'ny fitsaboana rano izay mety miovaova arakaraka ny fanaraha-maso mandeha ra sy biolojika tsotra mankany amin'ny rafitra fitsaboana be pitsiny.